Xariga Xildhibaan ka tirsan Jubbaland oo laga warbixiyay | Baydhabo Online
Xariga Xildhibaan ka tirsan Jubbaland oo laga warbixiyay
Xili shalay Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose lagu xiray xildhibaan kamid ah xildhibaanada Maamulka Jubbaland ayaa arrintaas waxaa Idaacadda Shabelle uga warramay Xildhibaan Bashiir Faaqid Buraale oo kamid ah Xildhibaanada Maamulka Jubbaland.
Sidoo kale Xildhibaanka ayaa sheegay in Xildhibaan Shucayb oo kamid ah xildhibaanada Maamulka Jubbaland ay xireen Ciidanka maamulka, waxaa uuna intaas ku daray in jir-dil loo gaystay inta aan la xirin ka hor.
Mudane Bashiir Faaqid ayaa tibaaxay in xildhibaanka Xasaanadii uu lahaa laga qaaday dhibaatana ay u gaysteen ciidanka Jubbaland.
Isagoo hadalkiisa sii wato ayaa waxa uu ku dhaliilay Madaxwaynaha Maamulka Jubba and Axmed Maxamed Islaam ‘’Axmed Madoobe’’, in uu caga jugleyn uu ku hayo xildhibaanada Maamulka kuwaas oo ka soo horjeedo aragti ahaan hab Maamulka Madaxwayne Axmed Madoobe.
Maamulka Jubbaland iyo Saraakiisha Ciidanka ayaan wali ka hadlin sababaha keenay in la xiro xildhibaan Shucayb oo kamid ah xildhibaanada Maamulka Jubbaland.